5 buug oo ku saabsan cilmiga neerfaha wax ka akhriso xagaaga | Sameynta iyo daraasadaha
5 buug oo ku saabsan cilmu-nafsiga oo la akhriyo xagaaga
Maite Nicuesa | 31/05/2021 22:54 | Talooyin
Xagaagu waa mid ka mid ah xilliyada sannadka ee aqristayaal badani ku xirmaan raaxada akhriska. Neuroeducation waa mid ka mid ah mowduucyada kulul. Iyo, Sidaa darteed, waxaad ka heli kartaa buugaag gaar ah ee arimahan. Tababbarka iyo Daraasadaha waxaan la wadaagnaa xulasho cinwaanno ah si aan kuugu dhiirrigelino akhriskaaga xagaaga. Shan buug oo ku saabsan cilmu-nafsiga oo la akhriyo xagaaga!
1 Neuroeducation: Waxaad ku baran kartaa oo keliya waxa aad jeclaataa
2 Agora Of Neuroeducation. Sharaxay oo Lagu dabaqay
3 Neuroscience loogu talagalay barayaasha
4 Barashada barashada
5 Maskaxda ilmaha ayaa loo sharraxay waalidiinta
Neuroeducation: Waxaad ku baran kartaa oo keliya waxa aad jeclaataa
Maxay yihiin arrimaha saamaynta ku leh geeddi-socodka waxbarashada? Buuggan uu qoray Francisco Mora wuxuu jawaab ka bixinayaa su'aashan. Buugani wuxuu ka kooban yahay 22 cutub oo akhristaha uu ku baraarujinayo sixirka barashada isagoo adeegsanaya fikradaha muhiimka ah: shucuur, damqasho, xiise, feejignaan, xusuus, hal-abuurnimo...
Barashada ugu muhiimsan waxaa weheliya qiimaha shucuurta. Markuu ardaygu galo maaddo uu jecel yahay, heerka feejignaanta ayaa kor u kacaysa iyo aragtidiisa waqtiga ayaa is beddelay. Wax walba oo u muuqataa in ay si fudud qulquli macnaha halkan. Xaaladda ayaa isbadalaysa markuu iskudayo barashada maaddo aad u adag oo caajis badan.
Agora Of Neuroeducation. Sharaxay oo Lagu dabaqay
Tani waa shaqo ay wada qoreen Iolanda Nieves de la Vega Louzado iyo Laia Lluch Molins. Kani waa mashruuc ka dhasha doodda iyo iskaashiga si loo milicsado arrintan. Goob kulan oo diiradda saareysa feejignaanta shaygan daraasadda: waxbarashada iyo awoodeeda isbeddelka joogtada ah iyada oo loo marayo raadinta heer sare.
Kani waa buug xiiso u leh macallimiinta, qoysaska iyo xirfadleyda ka shaqeeya goobta tababarka. Buuggu wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa arrintan iyada oo loo marayo khubaro kuwaas oo halbeeg u ah qaybtan.
Neuroscience loogu talagalay barayaasha
Shaqadan, oo loogu talagalay xirfadlayaal ku weheliya ardayda xiisaha waxbarashada, ayaa sharraxaysa wax kasta oo xirfadlayaashu had iyo jeer rabaan inay ka ogaadaan maskaxda. Shaqadani waxay ku mashquulsan tahay barashada neerfaha iyada oo loo marayo luuqad fudud oo la fahmi karo oo loogu talagalay dadweynaha guud.
David Bueno i Torrens, oo ah qoraaga buuggan, waa cilmi-baare ku takhasusay hiddo-wadaha iyo borofisar ka tirsan Jaamacadda Barcelona. Sidoo kale wuxuu iskaashi la sameeyay cilmi-baare ka tirsan Jaamacadda caanka ah ee Oxford. Waa in la ogaadaa in neerfaha cilmiga neerfaha ay wax ku darsadaan adduunka barashada iyo tababarka. Sidaa darteed, shaqadani waxay xiiso u yeelan kartaa macallimiinta dhiirrigeliya, waxbarta iyo tababbarada ardayda.
Cinwaanka shaqada waa sida soo socota: Ku hagaaji awoodaada waxbarid adoo ogaanaya sida maskaxdu wax ubarto. Kani waa buug uu qoray Héctor Ruiz Martín. Ayuu yiri xirfadle, bayoolaji iyo cilmibaare, waa agaasimaha Mu'asasada Cilmiga ee Caalamiga ah.
Akhristaha shaqadu wuxuu aasaasi karaa wadahadal joogto ah oo uu la yeesho qoraaga buugga oo ka jawaabaya su'aalaha guud. Tusaale ahaan, ogow sababta dadka qaar ay uga helaan waqti sahlan waxbashada kuwa kale. Maxay tahay furaha aqoonta muddada-dheer ee xusuusta ku sii jirtaa dhaafitaanka waqtiga?
Maskaxda ilmaha ayaa loo sharraxay waalidiinta
Tani waa shaqo uu sameeyay valvaro Bilbao taas oo laga yaabo inay xiiseynayaan waalidiinta kuwaas oo, inta lagu jiro fasaxyada xagaaga, doonaya inay helaan meel ay ku aqriyaan buugaagta mowduucan. Caruurnimadu waa xilli nololeed ay wax ka mid yihiin barashada ugu habboon. Iyo sidee maskaxda ilmuhu u shaqeysaa? Buugani wuxuu bixinayaa jawaabaha su'aashan.
Waa maxay cinwaannada kale ee aad rabto inaad kula talisid akhristayaasha kale ee Tababarka iyo Daraasaadka? Shantaan buug ee ku saabsan cilmiga neerfaha ee aad akhriso xagaaga ayaa kugu dhiirrigalin kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Talooyin » 5 buug oo ku saabsan cilmu-nafsiga oo la akhriyo xagaaga
Immisa maaddo ayey tahay inaad ka gudubto si aadan dib ugu soo celin deeqda waxbarasho?